बुद्धिमान खरायो र मूर्ख हात्ती ! - Laltin Media
Home»मोटिभेसन»बुद्धिमान खरायो र मूर्ख हात्ती !
बुद्धिमान खरायो र मूर्ख हात्ती !
By लाल्टिन डट कम April 29, 2022 No Comments1 Min Read
शक्तिशाली हात्तीहरूको बथान घना जंगलमा बस्थे। उनीहरुले एउटा जङ्गलको सानो पोखरी ओगटेका थिए जसले गर्दा अन्य जनावरहरूलाई पानी पिउन असम्भव थियो। त्यहीँ नजिकै खरायोहरुको बस्ती थियो । पानी पिउन नपाएर खरायोहरुलाई निकै गाह्रो भएको थियो । खरायोका राजाले हात्तीको राजा गजराजकहाँ गएर समस्या प्रस्तुत गरे। हात्तीले उनको कुरालाई नराम्रोसँग खारेज गर्यो।
हात्तीलाई पाठ सिकाउनको लागि एउटा बुढो बुद्धिमान खरायो फेरी हात्तीको राजा भेट्न गयो । बुढो खरायोले गजराजलाई चेतावनी दिँदै भन्यो कि तालको देवता चन्द्रमा हात्तीको व्यवहारबाट दु:खी छन् र उनीहरुलाई श्राप दिन पृथ्वीमा आउन लागेका छन् । गजराजले खरायोको कुरामा विश्वास गरेन र त्यो कुरा प्रमाणित गर्न आग्रह गर्यो।
बुद्धिमान खरायोले पूर्णिमाको रातमा हात्तीको राजालाई तालमा लगेर चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब देखायो। त्यो देखेर, हात्तीले विश्वास गर्‍यो कि चन्द्र देवता उनीहरूलाई सजाय दिन पृथ्वीमा अवतरण गरे भनेर । त्यसपछि, हात्तीहरुको बथान आफ्नो अराजक व्यवहार परिवर्तन गर्न राजी भए।
नैतिक पाठ: सानो चतुराईले पनि ठूलो देखिने समस्या समाधान गर्न सक्छ।
#हात्ती र खरायोको कथा
चारवटी श्रीमती भएका राजाले सोधे, “मसँग परलोक को जान्छ?”